မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးရဲ့ တာယာအရွယ်အစားတွေက ဘာတွေလဲ။
Mankeel Sliver Wings ၏တာယာအရွယ်အစားသည် 10 လက်မအရွယ် ကြီးမားသောလေကျီရော်ဘာတာယာဖြစ်ပြီး Mankeel Pioneer သည် ကြီးမားသော 10 လက်မပျားလပို့အစိုင်အခဲရော်ဘာတာယာဖြစ်ပြီး Mankeel Steed သည် 8.5 လက်မအရွယ် ရော်ဘာအခဲတာယာဖြစ်သည်။
စီးနင်းသူများအတွက် လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
စီးနင်းသူ၏အသက်သည် ၁၄ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ကြားဖြစ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ဘီး၏အမြင့်ဆုံးအလေးချိန်မှာ 120KG ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးအရ၊ အလေးချိန် 120KG အောက်ရှိသူတွေကို စီးနင်းဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘေးကင်းမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်၊ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာမပြုလုပ်ပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စီးနင်းသူ၏အလေးချိန်၊ အရှိန်နှင့် gradient ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပါဝါကန့်သတ်ချက်သည် စီးနင်းသူကို ပျက်ကျစေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ စီးနင်းသူသည် အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ထပ်အန္တရာယ်များ။
အလေးချိန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ခံနိုင်ရည်တို့၌ Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာများ၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
အသစ်တီထွင်ထားသော လျှပ်စစ်စကူတာသုံးလုံးသည် ဤကဏ္ဍများတွင် မတူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်များရှိသည်။ အသေးစိတ်အတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှုပါ။
Mankeel Pioneer- အားအပြည့်သွင်းလိုက်လျှင် ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် 35-40KM အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဒီမော်ဒယ်ရဲ့ အသားတင်အလေးချိန်က 23KG ဖြစ်ပါတယ်။ သန်မာသော စွမ်းအားကို နှစ်သက်သော မြင်းစီးသူများ အတွက် ပို၍ စိတ်ထား ရှိပါသည်။ တောင်တက်ဒီဂရီသည် 20 ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဘက်ထရီ၏ ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် IP68 သို့ရောက်ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး 60-70KM အထိရောက်ရှိနိုင်သော ဘက်ထရီအပိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Mankeel Silver Wings- ဘက်ထရီသက်တမ်း 30-35KM အထိရှိပြီး Scooter ၏ အသားတင်အလေးချိန်မှာ 14kg သာရှိသည်။ လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အလွယ်တကူ ခေါက်သိမ်းနိုင်သည်။ မိန်းကလေးစီးဖို့ အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤမော်ဒယ်၏အမြင့်ဆုံးဝန်ထမ်းနိုင်စွမ်းရည်သည် 120KG သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အမျိုးသားစီးနင်းသူများအတွက်လည်းသင့်လျော်သည်။ ကိုယ်ထည်သည် ချောမွေ့ပြီး အပြည့်အဝ ဝှက်ထားသော ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း၊ APP လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေသည်။
Mankeel Steed- ဘက်ထရီ သက်တမ်းသည် 30-35KM အထိရှိပြီး ကား၏ အလေးချိန်မှာ 16KG ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဂျာမန်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ တင်းကြပ်စွာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော USB အားသွင်းပေါက်နှင့် ရှေ့ချိတ်တို့လည်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ရှေ့လက်ဘရိတ် + နောက်ဘီးဘရိတ်စနစ်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဆန်းသစ်ပြီး အဆင်ပြေသည်။
အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ကို စီးနင်းသူများ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာများ၏ မူလစက်ရုံဆက်တင်များကို ပုံသေသုံးအမြန်နှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အသုံးပြုသူများသည် APP တွင် မတူညီသောအမြန်နှုန်းများကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ သို့သော် သက်ဆိုင်ရာ မြန်နှုန်းကို သတ်မှတ်ရန် သင့်ဒေသတွင်း ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများကို သေချာလိုက်နာပါ။
မြေအောက်ရထား၊ ရထား၊ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်စကူတာ (စစ်ဆေးထားသည်)၊
နိုင်ငံနှင့် ဒေသများ၏ မူဝါဒများ ကွဲပြားမည်၊ လျှပ်စစ်စကူတာများတွင် ပါ၀င်သော ဘက်ထရီ ပါရှိသောကြောင့် လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဒေသဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်း၏ စည်းမျဉ်းများကို ကြိုတင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Mankeel Silver Wings နှင့် Mankeel ၏ ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် IP54 ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် အပြင်ထွက်စီးခြင်း နှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားသည်။
Mankeel Pioneer ၏ ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် IP55 ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီထိန်းချုပ်ကိရိယာ ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ IP68 ဖြစ်သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပါက အပြင်ထွက်စီးနင်းခြင်းနှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားသည်။ လိုအပ်ပါက မိုးဖွဲဖွဲကျပါက အပြင်ဘက် ခရီးတိုသာ စီးပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘေးကင်းမှုအတွက်၊ အခြားဆိုးရွားသောရာသီဥတုတွင် အချိန်မရွေး အပြင်ထွက်ရန် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
အက်ပ်ကို ဘယ်မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရမလဲ။
အသုံးပြုသူများသည် Mankeel APP ကို ​​manual မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Mankeelde တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ QR ကုဒ်ကိုစကင်န်ဖတ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းသည် Android နှင့် IOS ဗားရှင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာ APP ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် Apple စတိုးနှင့် Google Play တို့တွင် Mankeel ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အတွက် အသုံးပြုသူများမှ တရားဝင်အမှာစာကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အချိန်မှစ၍၊ ယာဉ်ကို တမင်တကာ မပျက်စီးမချင်း တစ်နှစ်အာမခံ ပေးနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက် အောက်ပါတို့ကို ကိုးကားပါ။
Scooter ပျက်သွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
Scooter တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းပါက၊ သင်သည် လက်စွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကွဲပြားသော ချို့ယွင်းချက် ဆိုင်းဘုတ်များကို စစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ပြဿနာဖြေရှင်း၍ မပြုပြင်နိုင်ပါက၊ စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် သင်ယခင်က ဆက်သွယ်ထားသော အရောင်း သို့မဟုတ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာစီးရတာ အန္တရာယ်ကင်းသလား။
Mankeel ၏လျှပ်စစ်စကူတာများသည် ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း အမျိုးမျိုးသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည်များ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ချက်များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာပါသည်။ Ride Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လက်စွဲပါ ဘေးကင်းသောစီးနင်းခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာနေသမျှကာလပတ်လုံး ဘေးကင်းပါသည်။
အသုံးမပြုမီ ဘက်ထရီအားသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပထမအသုံးမပြုခင် ဘက်ထရီကို အပြည့်သွင်းထားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီအား "ဘရိတ်ဝင်" ရန် လိုအပ်ပါသလား။
မှန်ပါသည်၊ ဘက်ထရီများသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သို့မရောက်မီ စွန့်ထုတ်သည့်စက်ဝန်း သုံးခုပါ၀င်သော "break-in" cycle ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသော စွန့်ထုတ်မှု သုံးခုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော အားပြန်သွင်းမှု သုံးခု ပါဝင်ပါသည်။ ဤကနဦး “ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခြင်း” လည်ပတ်ပြီးနောက် ဘက်ထရီများသည် အများဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဝန်အောက်ရှိ လိုင်းဗို့အား အတက်အကျများ နည်းပါးမည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီတွေက ဘယ်လောက်ကြာကြာ အားသွင်းနိုင်မလဲ။
အသုံးမပြုသည့်အခါ ဘက်ထရီအားလုံးသည် သူ့အလိုလို ထွက်လာသည်။ အလိုအလျောက် ထုတ်လွှတ်သည့်နှုန်းသည် ၎င်းတို့သိမ်းဆည်းထားသည့် အပူချိန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အလွန်အေးသော သို့မဟုတ် ပူသော သိုလှောင်မှု အပူချိန်များသည် သာမန်ထက် ပိုမြန်သော ဘက်ထရီများကို ကုန်ဆုံးစေပါသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဘက္ထရီ ဖြစ်သင့်တယ်။
ကိုယ်ထည်၏ ကျောရိုးကို အာကာသဆိုင်ရာ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေး အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
Mankeel Silver Wings မော်ဒယ်က ဘယ်လိုတာယာအမျိုးအစားလဲ။ ဖောင်းဖို့ လွယ်သလား။
Mankeel Silver Wings သည် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလေ့ရှိသော စက်ဘီးဖောင်းပွပေါက်များတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော 10 လက်မအရွယ် လေလုံသည့်ရော်ဘာတာယာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်အား တာယာများကို လေဝင်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ထပ်တိုးငွေဖောင်းပွမှု နော်ဇယ်ပြွန်တစ်ခု ပေးပါမည်။
အပူချိန်က စီးနင်းမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလား။
စီးနင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် manual တွင်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ပါက၊ ၎င်းသည် တာယာပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သော ဘေးကင်းမှုပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လက်စွဲပါ အကြံပြုချက်များကို သေချာလိုက်နာပါ။
Mankeel Pioneer ၏ဘက်ထရီသည် ဖြုတ်တပ်နိုင်ပြီး အစားထိုးနိုင်သည်။ Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာ၏အခြားမော်ဒယ်များသည် disassembly ကိုမထောက်ပံ့ပါ။ ၎င်းတို့အား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖြုတ်ထားလျှင် လျှပ်စစ်စကူတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပျက်စီးမည်ဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့် မီးတွေ အလိုလို ပိတ်သွားတာလဲ။
၎င်းသည် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပြီး ပါဝါကုန်သွားခြင်းတို့ကို မေ့လျော့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်ပတ်မှုမရှိဘဲ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးနောက် အလိုအလျောက်ပိတ်ရန် စကူတာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သင်သည် ဤဆက်တင်ကို မလိုလားပါက အချိန်ပိုကြာပြီးနောက် အလိုအလျောက်ပိတ်ရန် သို့မဟုတ် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုက်ရိုက်ပိတ်ရန် APP တွင် ၎င်းကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Mankeel မှတရားဝင်လည်ပတ်နေသော Third-party အရောင်းပလက်ဖောင်းတွင် သင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို တိုင်ပင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mankeel ၏အမှတ်တံဆိပ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်များကို ခေါ်ယူနေပါသည်။ မှကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ အေဂျင်စီသဘောတူညီချက်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ဥပဒေအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
Mankeel သည် ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် အေးဂျင့်များအား မည်သို့ပံ့ပိုးကူညီသနည်း။
Mankeel တွင် သင့်အား အောက်ပါ ပြည့်စုံသော ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးစွမ်းနိုင်သော ဝန်ထမ်း 135 ဦးရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။
Mankeel တွင် ဖြန့်ဖြူးသူများ၏ ရွေးချယ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော စံနှုန်းများ ချမှတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပဏာမစာရင်းစစ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဖြန့်ဖြူးသူများသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ချီရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ ထုတ်ကုန်စျေးနှုန်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့မှုတွင်ဖြစ်စေ သင်ဖြန့်ဝေသည့်နေရာ၌ သင်၏အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာပါမည်။
2. After-sales service နှင့် after-sales service, logistics delivery of timeliness of guarantee
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပနှင့် အမေရိကတွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုများကို လွှမ်းခြုံနိုင်သော အမေရိကန်နှင့် ဥရောပရှိ ကွဲပြားခြားနားသော နိုင်ငံခြား ဂိုဒေါင်များနှင့် အရောင်းအပြီးတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့်နေရာ4ခုကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သင့်အား သိုလှောင်မှု ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာရန်အတွက် drop-ship ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း သင့်အား ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
3. ဘုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့၊ ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်မျှဝေခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းပုံများ၊ ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များနှင့် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များ၊ သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်များကို မျှဝေရန်နှင့် သင့်အတွက် အခကြေးငွေပေးဆောင်သည့် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကို မျှဝေပေးပါမည်။ နှင့် သင်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် သင့်ဖောက်သည်စီးဆင်းမှုကို ကူညီရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေးတို့ကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် သုံးစွဲသူများအား သင့်အား မိတ်ဆက်ပေးပါ။
1၊ Mankeel တွင် လောလောဆယ်တွင် US/Germany/Poland/UK တွင် ဂိုဒေါင်4ခု ရှိပြီး US နှင့် Europe ၏ ပိုင်နက်တစ်ခုလုံးကို 8 နာရီအတွင်း အပြီးပို့ဆောင်ရန် အာမခံကာ 24 နာရီအတွင်း ခြေရာခံနံပါတ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်တစ်ခုစီအတွက်၊ သင်၏အရေးတကြီးမှာယူမှုကို တုံ့ပြန်ရန် အလုံးရေ 1,800 ကို ပြင်ဆင်ပေးပါမည်။
2၊ ထို့အပြင်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့လိုပါက၊ သင့်အမိန့်အရ ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်မီပြင်ဆင်ပြီး သင်နှင့်အတူပေးပို့ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါက သင့်အတွက်အချိန်ဇယားအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
Mankee ရဲ့ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုက ဘယ်လိုလဲ။
Mankeel သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ရေမြှုပ် + ပုံးပုံး + တိပ်ခွေကို အသုံးပြုထားပြီး အနည်းဆုံး 175 စင်တီမီတာ အမြင့်တွင် ပြုတ်ကျသည့် စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း ပျက်စီးမည်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံထားပြီး သင့်ထံပေးပို့သောပစ္စည်းများသည် နဂိုအတိုင်းဖြစ်ပြီး အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်။
သင့်လျှပ်စစ်စကူတာအသုံးပြုနည်းကို အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများ မသိပါကကော။
Mankeel တွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုပုံကို သင်သင်ပေးရန် စာရွက်လမ်းညွှန်များနှင့် ဗီဒီယိုများရှိသည်။ အသစ်တစ်ခုရရှိသောအခါmankeel လျှပ်စစ်စကူတာကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုကို သင်အပြည့်အဝနားလည်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် ပက်ကေ့ဂျ်ရှိ သုံးစွဲသူလက်စွဲ၏ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ လျှပ်စစ်စကူတာ. ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးနင်းရန်သင့်အားပြောပြမည့်အသုံးပြုသူလက်စွဲတွင်အသေးစိတ်အန္တရာယ်ကင်းသောစီးနင်းလမ်းညွှန်ချက်များပါရှိသည်။လျှပ်စစ်စကူတာ ဘေးကင်းသည်။ly နှင့် dလျှပ်စစ်စကူတာများအတွက် အသေးစိတ်စည်းမျဉ်းများ။